ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ ရထားတွဲ ၂၁ တွဲ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိ - Yangon Nation News
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ ရထားတွဲ ၂၁ တွဲ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိ
ဂျပန်အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့အစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားတဲ့ ရထားတွဲ ၂၁ တွဲ ဟာ ရန်ကုန်သို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့ မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ရထားတွဲ ၂၁ တွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မကြာသေးမီကာလအထိ ပြေးဆွဲအသုံးပြု ခဲ့ပြီး မြန်မာ့မီးရထားက ပြန်လည်မွမ်းမံပြီးပါက ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း နဲ.အခြား ရထားလမ်း ပိုင်းတွေမှာ ပြေးဆွဲသွားရန် ရည်ရွယ်ထားတယ်လို.သိရပါတယ်။
မြန်မာ့မီးရထားနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအတွက် ရထားတွဲအသစ် ၆၆ တွဲ ဝယ်ယူရန် ဆောင်ရွက်နေပြီး အဲဒီမတိုင်မီ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့အစီအစဉ်ဖြင့် ဂျပန် နိုင်ငံတွင် ပြေးဆွဲနေသည့် ရထားတွဲ ၃၂ တွဲကို ယခုနှစ်အတွင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားရန် လျာထားကာ ယခုတစ်ခေါက်တွင် ရထားတွဲ ၂၁ တွဲ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို.သိရပါတယ်။
အခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်း ရထားတွဲ ၅ တွဲ ရောက်ရှိထားပြီး မြန်မာ့မီးရထားက ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်လို. မကြာမီတွင် ပြေးဆွဲအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရဟာ ရထားတွဲများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရထားလမ်း အောက်ခံမြေသားနှင့် လမ်းကြောင်း၊ ရထားလမ်းပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရထားလမ်းအချက်ပြစသည့်တို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့မီးရထား နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။
ရထားလမ်းကြောင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံ အကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာ့မီးရထားတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးလုနီးပါး ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းတွင် ရထားခါယမ်းမှုလျော့ကျခြင်းစသည့် သက်တောင့် သက်သာရှိမှုအခြေအနေများ တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ရထားလမ်းအပါအဝင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အခြေခံအ ဆောက်အအုံအဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို. ရန်ကုန်မြို.ဂျပန်သံရုံးက ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Source – Embassy of Japan in Myanmar
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Facebook Account တစ်ခုဖွင့်လှစ်
မန္တလေး မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်ဘုရားကြီးကို 3D Scan ဖတ်။